2 Iindwendwe Vala Cliffs Moher Ennis, Burren, Lahinch
I-Old Dairy yindlu eyahlukileyo ehlonyelwe kwiCullinan House eyindlu yasefama yokuqala yosapho lwaseCullinan olubuyela emva kwizizukulwana ezininzi. Indlu yaseFama yesiNtu ikwasetyenziselwa indawo yokuhlala yeholide kwaye inomnyango wayo wabucala. Ihlala ecaleni kweThe Old Cowshed kwaye zombini zibekwe kwifama yemveli engama-20 ejongene neBurren National Park. Ipropathi yimizuzu emi-5 ngemoto ukusuka kwiLali yaseCorofin kunye nemizuzu eli-14 ukusuka e-Ennis kwidolophu yase-County Clare.
Le ndlu ibucala kwaye ivalelwe kodwa kumgama omfutshane wezinto ezininzi ezinomtsalane zalapha ngemoto.
Le ndlu ilungele abantu okanye isibini kwaye ayibafanelanga abantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-12.
Iyakonwabela iimbono ezibalaseleyo zeBurren, iLake Atedaun kunye nelali yaseCorofin.
Le ndawo ibekwe imizuzu kude nelali yaseCorofin edla ngokubizwa ngokuba "yiSango eliya eBurren" Ilali inezinto ezininzi eziluncedo kwaye yaziwa ngomculo wayo wesintu unyaka wonke.
Ipropathi ivalelwe kodwa kumgama omfutshane wezinto ezininzi ezinomtsalane zalapha ngemoto. Iyakonwabela iimbono ezibalaseleyo zeBurren, iLake Atedaun kunye nelali yaseCorofin.
Ilali yaseCorofin idume ngoMculo wayo wesiNtu kwaye ibonelela ngeevenkile ezilungileyo kunye nevenkile yokutyela njl
Le propathi ibonelela ngenkqubo yokuzijonga ngokwakho enika ukukhangela okuguquguqukayo ukusuka kwi-4pm ukuya phambili. Umamkeli uhlala kwipropati eyahlukileyo ngaphakathi kweehektare ezingama-20 kodwa indawo yabucala kunye nemida ijongwa ngamaqela omabini. Inkxaso yokugcina iyafumaneka ukuba kwaye xa ifuneka.
Le propathi ibonelela ngenkqubo yokuzijonga ngokwakho enika ukukhangela okuguquguqukayo ukusuka kwi-4pm ukuya phambili. Umamkeli uhlala kwipropati eyahlukileyo ngaphakathi kweehekt…